UACE UKHULULEKILE NGAPHAMBI KOSUKU LWAKHE OLUKHULU ENKANTOLO | Scrolla Izindaba
UACE UKHULULEKILE NGAPHAMBI KOSUKU LWAKHE OLUKHULU ENKANTOLO
UAce Magashule uthi ukhululekile ngaphambi kokuvela enkantolo ngoLwesihlanu.
Engxoxweni emfushane nabakwa-Scrolla.Africa, uNobhala-Jikelele we-ANC uthe: “Ngeke ngibuyele emuva okwamanje. Ngizolwa ngoba akuqondiwe mina kodwa kuqondwe i-ANC. Umsebenzi wami njengonobhala-jikelele ukuvikela i-ANC ezitheni noma ngabe zivela ngaphandle noma ngaphakathi ku-ANC. “
Incwadi yakhe egunyaza ukuboshwa mayelana nenkontileka yemali eyizigidi eziyi-R255 ye-asbestos e-Free State, iqinisekiswe oKlebe ekuqaleni kwaleli sonto, nokuqeda ukuqagela okwenzeke emavikini ambalwa mayelana nokuboshwa kwakhe.
UMagushule uthe uyisakhamuzi esigcina umthetho futhi uzoya enkantolo ngoLwesihlanu.
Uxwayise amaqembu alwayo kwi-ANC ukuthi angahlukanisi iqembu egameni lakhe.
“Njengonobhala-jikelele umsebenzi wami wukuhlanganisa amalungu e-ANC ngazo zonke izindlela,” uyasho.
“Isitha sizojabula ukusibona sihlukene phakathi,” kusho uMagashule.
Incwadi yakhe yokuboshwa yandise uqhekeko ku-ANC ebusayo. Olunye uhlangothi lusekela uMagashule, kanti olunye luthi akehle esikhundleni ngaphansi kwamacala enkohlakalo.
UMagashule odelelayo uthe ngeke ashiye phansi isikhundla, uthi wakhethwa amagatsha e-ANC ngenkathi kunengqungquthela yokukhetha ubuholi kowezi-2017. Lokhu kwenzeka yize kunesinqumo se-NEC sokuthi abaholi ababhekene namacala enkohlakalo kumele bashiye esikhundleni uma amacala abo esaqhubeka.
“Ngizosula igama lami ngiqhubeke nomsebenzi engiqokelwe ukuwenza. Ngeke ngivumele amaqembu avelayo eqenjini ukuba asizakale ngami ngenxa yencwadi yokuboshwa,” kusho uMagashule.
Ebuzwa ukuthi uzizwa kanjani ngaphambi kokuvela enkantolo, uthe: “Ngikhululekile.”
Incwadi kaMagashule yokuboshwa yakhishwa maqondana nethenda yezigidi eyanikezwa u-Edwin Sodi, ngenkathi uMagashule esanguNdunankulu wase-Free State. Wabamba isikhundla sikaNdunankulu kusukela kowezi-2009 kwaze kwaba ngunyaka wezi-2018 lapho ethathe khona isikhundla sokuba ngunobhala-jikelele ngokugcwele eLuthuli House, lapho okuhlala khona oNdunankulu be-ANC.
UMagashule, owayengumeluleki omkhulu kaloyo owayenguMengameli wezwe uJacob Zuma, uthe izandla zakhe zihlanzekile, wengeza ngokuthi uzophuma kulokhu engenamyocu.